ဗဟုသုတ Archives - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Posts tagged with 'ဗဟုသုတ'
tmblog | Knowledge, Mobile Phones | April 16, 2016
လက်ကောက်ဝတ်အရေပြားကို မျက်နှာပြင်အဖြစ် ထိတွေ့အသုံးပြုလို့ရမယ့် လက်ကောက်ဝတ်ဖုန်းတစ်မျိုး ဈေးကွက်ထဲရောက်လာတော့ပါမယ်။ Cicret လို့ခေါ်တဲ့ ဒီလက်ကောက်ဟာ စမတ်ဖုန်းနဲ့ တက်ဘလက်တွေကို အစားထိုးဖို့ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ကောက်ထဲမှာ အသေးစားပရောဂျက်တာကို ထည့်ထားတာ ဖြစ်ပြီး အရေပြားမျက်နှာပြင်ကို ထိတွေ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဆင်ဆာ ၈ ခုအသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလူးတု၊ ဝိုင်ဖိုင်တို့အပြင် USB ပေါက်ပါ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ အီမေးအသုံးပြုခြင်း၊ ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်း စတဲ့
tmblog | Knowledge, Motivation | February 22, 2015
ထိုသူဟာ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သလား? ထိုသူရဲ့ အပြင်ပိုင်းကို ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့ မရပါ။ ပြီးတော့သူ့ကိုလူတွေက ဝိုင်းဝန်းချီးမွမ်းနေကြလို့လဲ လူကောင်းဟု မဆိုနိုင်ပါ။ အမှန်နဲ့ အမှားနှစ်ခုစလုံးကို ခွဲခြားသိပြီး၊ အမြဲတမ်း အမှန်တရားကိုပဲ သိအောင်ကြိုးစားနေသူကိုလဲ လူကောင်းတစ်ယောက်လို့ မဆိုနိုင်ပါ။
တခြားတစ်ယောက်အတွက် စံနမူနာကောင်းပြရုံဖြင့်လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘဝရဲ့ နိယာမတရားအရ လူကောင်းတို့အတွက် သတ်မှတ်ထားသော မဏ္ဏိုင် (၆) ချက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ- ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ ရိုသေလေးစားမှု၊ တာဝန်သိမှု၊ တရားမျှတမှု၊ စောင့်ရှောက်မှု နဲ့ နိုင်ငံသားကောင်းပီသမှုတို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ပြီးပြည့်စုံခြင်း – မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ပြီး ရပ်တည်နိုင်ရမည်။ မိမိ၏ ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုကို မတွေဝေပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြောစကားကို နားမယောင်ဘဲ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(၂) ရိုးသားခြင်း – လိမ်လည်ခြင်း၊ လှည့်ဖြားခြင်း၊ ခိုးဝှက်ခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ခြင်း တို့ကို ဘယ်သောအခါမှ
tmblog | Knowledge | December 30, 2014
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ (ယူနက်စကို) (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) အဖွဲ့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိယဉ်ကျေးမှုအဖိုးတန်အမွေအနှစ်များနှင့်သဘာဝနယ်မြေများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရာတွင် နိုင်ငံတကာမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်မူဘောင်ချမှတ်ပေးသည့်ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝအမွေအနှစ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) (၁၉၇၂ ခုနှစ်) နှင့်အညီ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဇုန်များကို သတ်မှတ်လျက်ရှိသည်။ အမွေအနှစ်ဇုန်များအား (၁) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဇုန်၊ (၂) သဘာဝအမွေအနှစ်ဇုန် နှင့် (၃) ယဉ်ကျေးမှု နှင့်သဘာဝရောနှောအမွေအနှစ်ဇုန် ဟူ၍ ၃ မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဇုန်များတွင် သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများ၊
All times are GMT 6.5. The time now is 12:49 am.